लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री उपेक्षित ! SULSULE:A Truly Nepali News Portal
लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री उपेक्षित !
२०७५ चैत १७ मा प्रकाशित
सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव उपेक्षित भएका छन् । उनले सम्मेलनको बस्ने कुर्सी समेत पाउन सकेनन् । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मञ्चमा थिए साथै अरु मन्त्रीहरु अग्र भागमा भए पनि उद्योगमन्त्री यादव स्क्रिनमा उद्घाटन समारोह हेर्न मिल्ने गरी बनाइएको हलको अन्तिम लहरमा बसेका थिए । लगानी सम्मेलनमा उद्योगमन्त्रीको सक्रियता कतिसम्म हुनसक्छ भन्ने बुझ्न २०७३ को लगानी सम्मेलनलाई हेर्दा पुग्छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दा रामशरण महत अर्थमन्त्री र नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री थिए । सम्मेलनमा जोशीको सक्रियता महतको भन्दा बढी थियो । तर, यो पटक उद्योगमन्त्री सुरुदेखि नै उपेक्षित भएका छन् । निजी क्षेत्रसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने र लगानीकर्तासँग दैनिक संवादमा रहनुपर्ने उद्योगमन्त्री यादवलाई सम्मेलनको आयोजनामा भूमिका नदिइँदा असुन्तुष्ट देखिएका छन् ।
लगानी सम्मेलन गर्दैगर्दा भोलि लगानी भित्र्याउन उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । ६ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृतिदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्थापनसम्मका काम यही मन्त्रालय र मातहतको विभागले गर्नुपर्छ । मन्त्री यादवले सम्मेलनमा आयोजकले दिएको उपहार लिन समेत अस्वीकार गरेका छन् ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको लगानी सम्मेलनको उद्योगसम्बन्धी सत्रको सभाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री यादवले सत्रको समापनपछि दिइएको उपहार अस्वीकार गरेका हुन् । आयोजकको तर्फबाट सत्रमा सभाध्यक्ष, सहजकर्ता तथा सबै वक्ताहरुलाई उपहार (मायाको चिनो) हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम थियो । तर मन्त्री यादवले पुरस्कार नलिने भन्दै आफ्नो आसनबाट उठ्न चाहेनन् । मन्त्री यादवबाहेक अन्य सबै सहभागीले भने आयोजकको उपहार ग्रहण गरेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)